အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်):”ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bamas should declare openly if they cannot grant equal rights to all the citizens
Thousands gather in Oslo to sing song Anders Breivik hates »
“မတူသော အယူအဆများ ညှိနိုင်းဆွေးနွေးကြရာတွင်၊ အစဉ်အလာကြောင့် အယူများအပေါ်အားပြုသည်ထက်၊ ဆင်ခြင်တ…ုံတရားကို ရှေ့တန်းတင်သည်က လူမှုရေးသဟဇာတမျှမှုကို ပိုမိုဦးတည်စေနိုင်လိမ့်မယ်” ။ (အက္ကဗာနန်းရင်ပြင်တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနောဖလှယ်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့သော အက္ကဗာမူဆလင် ဘုရင်ကြီး)။
Tags: Asia, Bama, Burma, Myanmar, Southeast Asia
This entry was posted on April 26, 2012 at 1:07 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်):”ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။””
April 28, 2012 at 11:07 am | Reply
Ko Lin Win Thu SHARED THIS:
အခု ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးတင်နေကြတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိလှသော အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူများသို့ တခုအသိပေးချင်ပါတယ် အခုအချိန်အခါဟာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချိုးအကွေ့ လေးများကို ဖြတ်သန်းနေကြချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ သမိုင်းတလျောက်မှာ နိုင်ငံရေး ကို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးတို့နဲ့ ခုတုံးလုပ်ပြီးအမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ သာဓက တွေ မြောက်များစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ် ။ သမိုင်းဆိုတာ သင်ခန်းစာယူဖို့ပါ ။ ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ အထိကရုံးတွေ လူမျိုးရေး သတ်ပွဲတွေ နောက်ဆုံးတော့ ခင်ဗျတို့ ဖြစ်ကြသတ်ကြတဲ့ တရုတ် ၊ကုလား အမြစ်ပြတ်သွားလို့လား ဘာတွေ ထူးခြားလာလဲ ။ ကြားထဲက ဘယ်သူတွေ နှစ်နာ သေကြေကြပြီး ဘယ်သူတွေ အမြတ်ထုတ်သွားပါသလဲ ။ ဒါတွေ ပြောနေလို မင်းက ဘာကောင်လဲ ဘာ ဘာသာလဲ လိုမေးရင်တော့ ရှင်းရှင်းပါဘဲ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မြန်မာလူမျိုးပါ။ ကျွန်တော် အဘိုး( နန်းတွင်း ပရိယယ် ဓါးသိုင်းအဖွဲ့ချုပ်) ဟာ ကုလား ဗမာ အထိကရုံးမှာ သွေးတွေနဲ့ ခဲနေလို့ ခွာမရတဲ့ ဓါးမြှောင်နှစ်ချောင်းကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ရေနွေးနဲ့ လောင်းပြီး ခွာယူခဲ့ရတဲ့အထိ သတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ သို့သော် ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ အဖိုးဟာ ဘာသာတရားကိုလေ့လာတဲ့ နေရာမှာ မိမိ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားတင်မဟုတ်ဘဲ တခြားဘာသာတရားတွေ ကိုပါလေ့လာစေတယ် ။ ဒါကြောင့် ဓမ္မသတ် ဓမ္မဟောင်း၊ ကိုရမ် သေသေချာချာ ဖတ်ဖူးသလို ၊ဟိန္ဒူ ၊ဂျိန်းနဲ့ ဂျူး ကိုလဲ လေ့လာဖူးပါတယ် ။ ခရစ်ယန် အများဆုံးတတ်တဲ့ ကျောင်းမှ အထက်တန်းအောင်ခဲ့ ပြီး ဘုရားကျောင်းကို စိတ်ညစ်ရင် ဘုရားစေတီဖုထိုး ကို မသွားနိုင်တဲ့ အခါ ကျွန်တော့ရဲ့ အစားထိုး စိတ်ငြိမ်ရာ အဖြစ် ရောက်သလို မူဆလင်တို့ရဲ့ ဗလီက ပေးဝေတဲ့ ဆမိုင်နဲ့ ပဲဟင်းလဲ မြည်းဖူးပါတယ် ။ ကျွန်တော့မှာ လည်ပင်းဖက် ပေါင်းလာတဲ့ ခရစ်ယန် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသလို မူဆလင် သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှ ကိုးကွယ်သူ လူ အားလုံးပေါင်းလို့ ၅၀ မကျော်တဲ့ ဂျူးဘာသာဝင်တွေ ထဲမှာလဲ ကျွန်တော့ရဲ့ မိတ်ဆွေရှိပါတယ် ။
ဆိုလိုတာက လေ့လာပါ အတူယှဉ်တွဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ။မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့တဦးခြင်းဆီရဲ့ ရင်ထဲ အသွေးအသားထဲမှာ ရှိဖို့ပါ ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်က သူတပါးရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို သွားတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဝူး ။ လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းဟာ သူ့အမျိုးသူချစ်ကြပါမယ် သူ့ဘာသာသူ အကောင်းဆုံးလို့ ယုံကြည်ပါမယ် ဒီလိုယုံကြည်လို့လဲ သူတို့ ကိုးကွယ်နေတာပါ။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးတွေ အစွန်းရောက် နေကြရင် ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေ လဲ မအေးချမ်းနိုင်သလို တိုင်းပြည်လဲ အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ပါဝူး ။ ကိုယ်အမျိုးကို ကိုချစ်ပါ ။ ကိုယ့်ဘာသာတရားကို ကိုယ် ဂဃနဏ သိအောင်လုပ်ပါ၊ သူများဘာသာကိုလဲ လေ့လာပါ လေးစာပါ။ လူများကို လေးစားမှ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လဲ လေးစားမှုပြန်ရနိုင်ပါတယ် ။ စိတ်ကနေ လျံထွက်နေတဲ့ ခင်ဗျတို့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် တွေကို ခင်ဗျတို့ရဲ့ အရိုးအကြော အသွေးအသားတွေထဲကို စိမ့်ဝင်ပြန့်နှံအောင် ကြိုးစားထည့်သွင်းထားပါ ။
April 30, 2012 at 1:52 pm | Reply
ကိုမြအေး၊ ၈၈ မျိုးဆက် နှင့် ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် နိုင်ငံရေးကစားခြင်း.
by Nay Myo on Sunday, April 29, 2012 at 5:33pm
ကျေးဇေူးတင်ပါတယ် အကိုတို့လို့လူမျိုးတွေရှိတာ မြန်မာပြည်အတွက် ရွှေထက်အဖိုးတန်ပါတယ်